राज्यले सम्बोदन गर्लान् त ? एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन -
राज्यले सम्बोदन गर्लान् त ? एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन
११ श्रावण २०७८, सोमबार १२:२२
काठमाडाैँ । कान्तिपुर दैनिकाकालागि सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), मधु शाही (बाँके), माधव अर्याल (पाल्पा), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), दुर्गालाल केसी (दाङ) र कमल पन्थी (बर्दिया) सुकुमबासी समस्याकोबारेमा समाचार लेखेका छन् । उहाँहरुले एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुमवासीको निवेदन परेको शिर्षकम समाचार लेखेका हुन् । यसरी उठान गरेको विषय वस्तुमा के राज्यले सम्बोधन गर्लान् त ? व्यवस्थापन कसरी गर्ला । यो आमचासोको विषय हो । सामाचार यसरी तयार पारेका छन् ।
बुटवल । घर उनका बाबुकै पालामा बनेको हो । तर घडेरीको स्वामित्व दाबी गर्न उनीसँग लालपुर्जा छैन । रूपन्देहीको मायादेवी–६ का ५५ वर्षीय होमबहादुर थापाको १७ धुर जग्गामा घर छ । २०३६ सालमा मालपोतबाट कागज गरेर किनेको जमिनको उनले पुर्जा पाएका छैनन् । ‘धेरै पटक दर्ताका लागि फारम भर्ने, बुझाउने, नापजाँच भयो,’ उनले भने, “तर पुर्जा दिएनन् ।”
बाँकेको डुडुवाका सुरवीर बुढाले झुप्रोमा टिनको छानो हालेका छन् । तीन दशकअघि बाबुको हात समाएर सुर्खेतबाट नेपालगन्ज आएको उनलाई सम्झना छ । त्यहीबेला डुडुवा खोलाको छेउ झाडी फाँडेर खरको झुप्रो बनाएका थिए । त्यहीं तीन पुस्ता हुर्कियो तर नातिनातिना खेलाउँदासम्म सुरवीरले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । धेरै पटक लालपुर्जा दिलाउँछौं भन्दै आएर नेताले भोट मागे, पाइन्छ कि भन्ने आशामा भोट हालेको उनले बताए । ‘तर अहिलेसम्म न सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र छ न त लालपुर्जा,’ उनले भने, “पुर्जा देखेर मर्न पाए हुन्थ्यो ।”
बैजनाथ–६ का डेढ सयभन्दा बढी बस्ती सुकुम्बासी छन् । ५० वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाएका छैनन् । स्थानीय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जसवीर वडले सुकुम्बासी आयोगले नाममात्र संकलन गरेको बताए । ‘नापी आए, किला गाडे, लालपुर्जा २० वर्षदेखि पाइएन,’ पाल्पाको तानसेन–६ का जितबहादुर विश्वकर्माले भने,“‘जुन नेता आए पनि उस्तै रहेछन् ।” आफ्नो टोलमा ५२ घर सुकुम्बासी रहेको उनले बताए ।
रैनादेवीछहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार बल्ढेङगढी, सत्यवती र जुठापौवामा ६ सय परिवार अव्यस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूले जंगल क्षेत्र, खोला, वर्षौंदेखि भोगचलन गरे पनि लालपुर्जा नभएको उनले बताए । त्यस्तै इन्दिरा पौडेलले कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–२, गोरुसिंगेस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशक बिताइसकिन् । ‘जन्म यहीं भयो,’ उनले भनिन्, ‘चाररपाँच पटक सुकुम्बासी आयोगमा गएर फारम पनि भरें तर अझै पुर्जा पाएको छैन ।’ कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–१, झगरहवाका दलबहादुर जीसीलाई पनि पुर्जा नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘१५ वर्षभन्दा अघिदेखि १२र१५ घर सुकम्बासी छौं,’ उनले भने । हुनेखानेले भूमिहीनका नाउँमा चलखेल गर्दा सुकुम्बासीलाई हेयले हेरिन थालेको उनले गुनासो गरे ।
भूमि आयोगका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम बस्नेतले तराईका ६ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांक इन्ट्रीको काम भइरहेको बताए । प्रदेशमा अहिले तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले दाबी गरे । ‘भूमिहीनको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हामी तथ्यांक संकलनको काम सकेर जग्गा नापजाँच गरी पुर्जा वितरणको तयारीमा छौं ।’ रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिकामा तीनरचार दिनमै पुर्जा वितरण सुरु गर्ने उनले बताए । आयोगले जग्गाविहीनलाई भूमिहीनको नामबाट र लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका नामबाट पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
ट्याक्सी चालकहरूको विरुद्धमा पठाओ राइडरहरु आन्दोलनमा
सत्तामा जानका लागि ”जसपा” पार्टी निर्वाचन आयोगको शरणमा